ओठ फुट्छ? यसो गर्नुहोस् – Etajakhabar
ओठ फुट्छ? यसो गर्नुहोस्
काठमाडौं – हात, खुट्टा, गाला, ओठ फुट्ने समस्या साधारण स्वास्थ्य समस्याहरू हुन् । ओठ शरीरको सानो भाग भए पनि यो फुट्यो भने धेरै समस्या पर्छ । केही खाँदा पोल्ने, हाँस्दा दुख्ने र अनुहारको सौन्दर्य बिग्रने हुन्छ । जाडोको समय वा सुख्खा धुलो चल्ने मौसममा सबभन्दा बढी ओठ फुट्छ । बढी चिसो हुँदा ओठमा रहेको तैलीय पदार्थ निकाल्ने ग्रन्थिहरूले कम तेल निकाल्छन् र फुटाइ सुरु हुन्छ । चिसो मौसममा बाहिर ननिस्केमा पनि ओठ फुट्नबाट बचिन्छ, तर यो सम्भव हुँदैन । त्यसैले बाहिर निस्कनुभन्दा अगाडि कुनै तैलीय पदार्थ ओठमा दल्ने र केही छिनपछि सूतीको कपडाले हल्का पुछेर निस्केमा केही रक्षा हुन सक्छ ।
ओठ फुट्दा सुरुआतमा ओठको माथिल्लो भागमा के–के भएजस्तो हुन सक्छ । ज्वरो आएको बेला वा जाडो भएको बेला यो बढी हुन्छ । यस्तो बेलामा पहिले छाला रातो हुन्छ, चिलाउँछ घाउजस्तो भएर सुन्निन्छ । यस्तो बेलामा ऐना हेरेर हातले ती घाउ वा फोकाहरू छुन मन लागिरहने वा जिब्रोले चलाइरहन मन लाग्ने हुन्छ । यस्तो किसिमको घाउ एक प्रकारको जीवाणुबाट हुन्छ । कसैकसैलाई यो बारम्बार भइरहन्छ । यो बेलामा घाउलाई सकेसम्म सफा र सुख्खा राख्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ मात्रै यसमा पीप आउन सक्छ । हातले छुने गर्नु हुँदैन ।स्वास्थ्य खबरपत्रिकामा खबर छ ।
यसै गरी हात खुट्टाका छाला खस्रो हुनु र फुट्नु पनि शरीरले तैलीय पदार्थ उत्पादन कम गरेका कारणले हुने अवस्थाहरू हुन् । यस कारण शरीरका हावा पर्ने भागमा चिल्लो पदार्थ/तैलीय पदार्थ दली फुट्न नदिन नरम पारेर राख्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १७, २०७३ समय: ९:४२:२४